ထိပ်တန်းအရောင်းဝန်ထမ်းများသည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု အဆင့်မြင့်မားကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့ ကုမ္ပဏီနှင့် ရောင်းသော ပစ္စည်းအပေါ်တွင်လည်း ယုံကြည်မှုရှိပါသည်။ သင့် ရောင်းကုန်ပေါ်တွင် သင့်ယုံကြည်မှု ပမာဏ နှင့် သင့်ဖောက်သည်လောင်းအား ၎င်းပစ္စည်းအပေါ် ယုံကြည်လာစေရန် ပြောဆိုနိုင်သောစွမ်းအင်တွင် တိုက်ရိုက်ဆက် သွယ်မှု ရှိပုံရသည်။ သင့်ပစ္စည်းသင့်အပေါ် သင်ယုံကြည်သောပမာဏထက် သင့်ဖောက်သည်လောင်းကယုံကြည်သောပမာဏကဘယ်တော့မှ မပိုနိုင်ပေ။
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ကဝီလျံဂျိမ်းပြောသလို ဖြစ်ပါသည်။ ယုံကြည်မှုကတကယ့်အဖြစ် အပျက်ကိုဖန်တီးပေးပါသည်။ ထိုကြောင့် သင်ယုံကြည်သောကုန်ပစ္စည်းကိုရောင်းရန် အရေးကြီးပါသည်။ သင့်ဖောက်သည် အသုံးပြုရန် ပိုင်ဆိုင်ရန် သင့်တော်သည်ဟု သင်ယူဆသောကုန်ပစ္စည်းကိုရောင်းရပါမည်။ တချို့လူများသည် ကိုယ်ရောင်းသောပစ္စည်းအပေါ်တွင် မယုံကြည်မှုမျိုးဖြစ်တတ်သည်။ ထိုသို့ ခံစားချက်မျိုးရှိနေပါကအပြိုင်အဆိုင်များသောဈေးကွက်တွင် အောင်မြင်မှုမရရှိနိုင်ပေ။ သင်ရောင်းသောအရာတွင် သင့်နှလုံးသား တစ်ခုလုံးမပါဝင်ပါကသင် ထိုကုန်ပစ္စည်းကိုများများရောင်းရမည် မဟုတ်ပေ။
ယခုအခါမှာစားသုံးသူတွေဟာကုန်ပစ္စည်းရဲ့ အရည်အသွေးထက် ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ အမှတ်တံဆိပ် ကိုသာကြည့်ပြီးဝယ်ယူလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ် (Brand) ကိုလူသိအောင်၊ သတိထားမိအောင် ထူးခြားအောင် ကြော်ငြာပါ။ ကြော်ငြာကြောင့် လူသိပြီး ဦးစွာစမ်းသုံးတဲ့ အချိန်မှာသင်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု ၊ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးတို့ကိုကျေနပ်အောင် ပေးပြီးနောက် ထိုအဆင့်ကိုမကျအောင် ထိန်းရင်းစားသုံးသူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် (Brand) တစ်ခုတည်ထောင်နိုင်မှာပါ။
အရောင်းသမားတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဆောင်ပုဒ် ၄ ခုရှိပါတယ်
၁. ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းနားလည်ပါ ၂. လူအများနှင့် တွေ့ဆုံပါ ၃. လူတိုင်းကိုဝယ်ဖို့တိုက်တွန်းပါ ၄. ပင်ကိုဥာဏ်ကိုသုံးပါ ဒီ ၄ ချက်ဟာအရောင်းသမားတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ၁ချက်ချင်း ရဲ့အဓိပ္ပယ်ကိုသေချာလေ့လာပြီးကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် ပုံစံကိုပြင်ဆင်ပြီး အသုံချနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေတဲ့ ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီအောင် နည်းနည်းတော့ပြင် ဆင် ဖြည့်စွက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဥပမာ - Online Sales သမားဆိုရင်
"( ၂ ) လူအများနှင့် တွေ့ဆုံပါ" ဆိုရင် Online ကနေအပြန်အလှန် နားလည်မှုရရန် လုပ်ခြင်းပါဘဲ...
(၃). လူတိုင်းကိုဝယ်ဖို့တိုက်တွန်းပါ" ဆိုရင် အတင်းအကျပ်တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ပါဘူး
(၄) .ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ် ကိုသုံး" ပြီးချဉ်းကပ်ဆက်သွယ် ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်...
Sale Promotion အတွက် သင်နှင့် သင်ရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းအပေါ်ယုံကြည်မှုရှိဖို့ရယ်၊ သင်၏ Brand ကိုတိုးမြင့်ကြော်ငြာဖို့ရယ်၊ The Best Seller တွေရဲ့ ဆောင်ပုဒ် (၄-ခု) နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးမိတ်ဆွေ၏လုပ်ငန်းများအရောင်းအားတိုးမြင့်နိုင်ပါစေ။ www.sme.com.mm (SMEs Business Institute) မှ ပြန်လည်ကိုးကားဖော်ပြပေးပါသည်။